Gen Cabdalla: “Yaa leh ciidamada sida gaarka ah u tababaran”? | KEYDMEDIA ONLINE
Gen Cabdalla: “Yaa leh ciidamada sida gaarka ah u tababaran”?
Taliye ku xigeynkii hore ee Hay’adda NISA, Cabdalla Cabdalla, ayaa su’aal galiyay, cidda ay u shaqeeyaan ciidamada sida garka ah u tababaran ee ka jira Soomaaliya.
MUQDISHO, Soomaaliya - Taliye ku xigeynkii hore ee Hay’adda Nabad-sugidda iyo Sir-doonka Qaranka, Gen Cabdladda Cabdallada, ayaa sharci darro ku tilmaamay in dalka ay xilligaan ka jiraan ciidamo si gaar ah u tababaran (Special forces), wuxuuna is weydiiyay “ma cidda biisha ayaa leh?”
Wuxuu sheegay in ciidanka gaar ka (Special forces), loogu tala galay in lagu fuliyo howlgallo gaar ah oo sharciga qeexayo “sida La dagalanka Argagixisada iyo Buracad badeedda” Wuxuuse tilmaamay in dalku uusan lahayn sharci lagu maamullo howlgallada gaarka ah.
“Soomaaliya weli sharci looma samayn lagu maamulo howlgallada gaar ah, xataa Xeerka argagixiso la dirirka weli lama soo saarin, waa yaabe ciidamada gaarka ah oo magacyada kala duwan wata, yaa iska leh? ma ninka biilka siiya”?. Ayuu yiri Gen Cabdladda.
Taliye ku xigeynkii hore ee NISA, wuxuu xusay in arinta amniga iyo difaaca qaranka aysan weli fari ka qodneyn, wuxuuna ku taliyay in Soomaalidu ka heshiiso dhisidda ciidan qaran oo sharci ku fadhiya .
“Waa in Soomaali ka heshiiso si dhab ahna dalka ciidan loo dhan yahay oo sharci ku dhisan loo diyaariyo. Hadii kale waxaan markhaati ka ahaan doonaa ciidamo qof leeyahay iyo kuwo qabaail leeyihiin,sida maanta Muqdisho ka jirta.” Ayuu sidoo kale yiri Gen Cabdalla.
Madaxweynaha waqtigu ka dhamaaday Farmaajo ayaa lagu eedeey inuu dano gaar ah u adeegsado ciidanka sida gaarka ah u tababaran ee Turkigu dhisay, kuwaas fuliyay holgallo ka dhan ah Madaxdii hore ee dalka.
Cabdalla Cabadalla ayaa laga xayuubiyay xilkii uu ka hayay NISA Bishii September 2018, Ka dib muranka dheer oo dhex maray isaga iyo hoggaanka hay'adda NISA.